Umbani ubulala ama-reindeer angama-323 eNorway | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iziphepho, ngaphezu kokuba yizimo zezulu ezimangalisayo, nazo zingaba yingozi enkulu uma ungakwazi ukufinyelela indawo ephephile ukuze uzivikele emibani, okuyilokho okwenzeka eNorway. Lapho, umlindi waseHardangervidda National Park wazithola Ama-reindeer angama-323 afile. Futhi cha, akuyona inganekwane yesayensi, yize ingase izwakale njengayo.
Ngokusobala, njengoba esho, kungokokuqala ukuthi isiphepho sibulale izilwane eziningi kangaka, ngakho-ke akazi ngokuqinisekile ukuthi kungani kwenzeke noma kanjani.
Abanye bazocabanga ukuthi bekungumsebenzi wezinguquko ezenzekayo kwisimo sezulu, kodwa iqiniso ukuthi kuyimfihlakalo engaxazululwa. Noma kunjalo, izinyamazane ezazisepaki cishe zazingenaso isikhathi sokufuna umhume noma indawo yokukhosela, kodwa ngani? Imisebe yakhiwa kanjani futhi ifika phansi ngasiphi isivinini?
Imisebe ikhiqizwa phakathi kwamafu nobuso bomhlaba, noma phakathi kwamafu amabili, ngenxa yokuhlangana phakathi kwezinhlayiya ezinhle nezimbi, ezenzeka ngaphezu kwamamitha ayi-5000 ukuphakama. Lapho izinhlayiya zesichotho zishayisana namakristalu e-ice futhi, ngokwenza kanjalo, izinhlayiya zithola inkokhiso enhle namakristalu angakhokhiswa kabi. Ngakho-ke, amakristalu eqhwa, alula kakhulu kunesichotho, ahudulelwa esiqongweni samafu asathuthuka, iCumulonimbus. Ngale ndlela, ekuphakameni okuphakathi kuka-8 no-10km kukhona imali ekhokhiswayo, futhi cishe u-5km ongemuhle, ngaleyo ndlela kukhiqizwe ukuphuma kukagesi. Futhi kuthatha ingxenyana yesekhondi ukushaya umhlaba (noma ulwandle)!
Kodwa kusenzima ukwazi ukuthi umbani wawungabulala kanjani inyamazane engaphezu kwamakhulu amathathu, yize abanye bezamile ukunikeza incazelo, njengoJohn Jensenius, weNational Oceanic and Atmospheric Institute of the United States, owathi kungenzeka ukuthi umbani ushaye isilwane nokuthi, njengoba bebeseqenjini, umsinga okhiqizwa phansi ubabulele bonke. Kunoma ikuphi, ngokusho kukaKjartan Knutsen, isikhulu seNorway Environment Agency, NgoLwesihlanu, ngo-Agasti 26, 2016, kube neziphepho ezinkulu endaweni, kodwa bebengakaze bayibone into efana nayo phambilini.
Nota: Ukuze kungalimazi ukuzwela komfundi, kuye kwakhethwa ukuthi kungabekwa izithombe zezidumbu zezinyamazane. Uma kwenzeka befuna ukubonana, kungenziwa chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Umbani ubulala izingulube ezingama-323 eNorway